`လက်နက်ရောင်းမယ်´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » `လက်နက်ရောင်းမယ်´
Posted by Green Rose on Nov 13, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, My Dear Diary, Think Different | 36 comments
`Green Rose…. နင့်ကို ဆရာက လာခဲ့ဦးတဲ့ ´… လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်လေး ကိုင်ပြီး ပြန်ဝင်လာတဲ့သူငယ်ချင်းက ပြောလို့ ဆရာ့ဆီသွားလိုက်တော့ ဆရာက ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ Green Rose ကိုဟိုဖက်လှည့်ဆိုပြီး ခြေသလုံးကို ၃ ချက်တိတိ ရိုက်ပါတယ်… ပြောစရာလည်း မလိုပါဘူး.. Green Rose ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ ကိစ္စ ကိုယ်သိတာပေါ့။ ပြီးတော့ Green Rose ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်လေးကို ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်လေး ကိုဖွင့်ကြည့်ပြီး Green Rose ပျော်လိုက်တာများ……
အဲဒီ့တုန်းက Green Rose က တတိယတန်း၊ နယ်မြို့လေးက ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းမှာ။
တရက် Green Rose တို့အိမ်စာတွေ လုပ်ခိုင်းလိုက်ပြီး နောက်နေ့မနက် အိမ်စာတွေ ထပ်ရပါတယ်။ ဆရာက အိမ်စာစာအုပ်တွေကို Green Rose တို့အတန်းချိန်အပြီးမှ သူ့ရုံးခန်းထဲ ယူသွားပြီး အမှတ်ခြစ်တာပါ။ အဲဒီ့နေ့ညနေပိုင်း အိမ်စာစာအုပ် Green Rose လက်ထဲပြန်ရောက်လာတော့ ဆရာအမှတ်ခြစ်ထားတဲ့ အောက်မှာ ဆရာ့လက်ရေးနဲ့ ရေးထားတာက ` လက်ရေးကြီးကြီးရေးပါ´ တဲ့…. Green Rose စိတ်တိုလိုက်တာလေ။ Green Rose ရဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ အမှန်ခြစ်လေးတွေပဲမြင်ချင်တာကို အဲဒီ့စာတမ်းကြီးက အရုပ်ဆိုးလိုက်တာ။.. နောက်ပြီး Green Rose ရဲ့လက်ရေးက အစကတည်းက ဒီအတိုင်းပဲဟာကို.. အဲဒါနဲ့ နောက်နေ့ အိမ်စာလုပ်ခိုင်းတော့ လက်ရေးကိုအကြီးကြီးရေး ပစ်လိုက်တယ်။ အဟုတ်.. ဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုရင် `အားကစားလုပ်သည်´ ဆိုတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးဟာ တစ်မျက်နှာပဲ။ စာအုပ်တစ်အုပ်လောက်များ ကုန်သွားလားမသိဘူး။ အဲဒါ နောက်နေ့ အိမ်စာထပ်ပြီး ဆရာဘာပြောမလဲလို့ စောင့်ကြည့်နေလိုက်တာ ညနေစာအုပ်လက်ထဲပြန်ရောက်တော့ နောက်ထပ် စာကြောင်း တစ်ကြောင်း ထပ်တွေ့လိုက်ရတယ် ` လက်ရေးသေးသေးရေးပါ´ တဲ့။ .. Green Rose ပဲလေ.. ဘာရမလဲ နောက်နေ့ အိမ်စာကို လက်ရေး သေးသေးပိစိလေးတွေနဲ့ ရေးပြီးတင်လိုက်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ အိမ်စာထပ်ပြီး ဆရာ့ရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကို စောင့်ကြည့်နေတာပေါ့။ အဲ.. ညနေလည်းကျရော အထက်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ဆရာက ကျောင်းသူတစ်ယောက်နဲ့ ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပြီး ရိုက်တော့တာပါပဲ။ အံ့သြစရာတော့ အတော်ကောင်းပါတယ်။ Green Rose ကဆရာရိုက်လို့ မငိုမိ၊ ၀မ်းမနည်းမိတဲ့အပြင် ကျေနပ်သွားသလိုပဲ။
အရင်တုန်းကတော့ မစဉ်းစားမိခဲ့ဘူး အခုပြန်တွေးကြည့်တော့မှ အဲဒီ့ဆရာက မျက်မှန်ကြီးနဲ့ကိုး.. ဒါပေမယ့် အရင်ကတည်းက Green Rose ရဲ့လက်ရေးက ဒီအတိုင်းပဲကို အဲဒီ့တစ်ခေါက်ကျမှ ဘာလို့ ကြီးကြီးရေးခိုင်းရတာလဲဆိုတာ ခုထိ စဉ်းစားလို့မရသေးဘူး။ (တကယ်လို့ ဆရာနဲ့ ပြန်တွေ့ဖြစ်ရင် မေးကြည့်ချင်ပါသေးတယ်၊ နောက်ပြီး မရည်ရွယ်ခဲ့ပေမယ့် ဆရာ့ကိုစော်ကားသလိုဖြစ်ခဲ့တာအတွက်လည်း ကန်တော့တောင်းပန်ချင်ပါသေးတယ်။)
လူ့စိတ်နော်.. Green Rose ထော်လော်ကန့်လန့်လုပ်တာကို ဆရာက မသိချင်ယောင်ဆောင်နေ တာကို Green Rose မကျေနပ်တာ။ နောက်ဆုံး ဆရာက ခေါ်ရိုက်လိုက်တော့မှ Green Rose ကျေနပ်သွားတာ။ နောက်ပြီး Green Rose ရဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ဆရာရေးပေးလိုက်တဲ့မှတ်ချက်ကလည်း `လက်ရေး ပုံမှန်ရေးပါ´ တဲ့။ Green Rose လိုချင်တာ ဒါပဲလေ.. အဲဒီ့နေ့က ကျေနပ်လိုက်ပုံများ ခုပြန်တွေး ခုကျေနပ်တုန်းပါပဲ။ ဆရာ့ကို စော်ကားတာတော့မဟုတ်ရပါဘူး။ စော်ကားလိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်း မဟုတ်ရပါဘူး၊ ဆရာ့ရဲ့ မှတ်ချက်ကို မကျေနပ်ကြောင်း ဆန္ဒပြ လိုက်ရတာကို ကျေနပ်မိတာပါ။
အဲဒီ့အကြောင်းလေး ပြန်တွေးနေရင်းနဲ့မှ လူ့စိတ်ကို ပိုပြီးနားလည်လာခဲ့တယ်။ လူဆိုတာက သူတို့ရဲ့ အပြုအမူတစ်ခုကို တုံ့ပြန်မှု့မရှိရင် တော်တော်မကျေမနပ်ဖြစ်တတ်တဲ့အမျိုးပဲလို့။ အဲဒီ့မှာ Green Rose အကျင့်တစ်ခုရသွားတာက မသိချင်ယောင်ဆောင်တဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲ။ ရီစရာပြောနေတဲ့လူရှေ့မှာ မရီပဲ တည်တည်ကြီးနေတာမျိုး၊ တစ်ယောက်ယောက်က Green Rose ကို ဒေါသထွက်စေချင်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒေါသမထွက်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတာမျိုးလေ…………. အမှန်က စိတ်ထဲကနေတော့ ဒေါသထွက်ချင်ထွက်နေမိမှာပေါ့ ဒါပေမယ့် တဖက်လူအမြင်မှာ သူတိုက်ခိုက်နေတာကို Green Rose ကအရေးတောင်မလုပ်ဘူးဆိုတာမျိုးထင်သွားရအောင် နေပြတာမျိုးပေါ့လေ။ အဲဒီ့နည်းလေး တော်တော်ထိရောက်တယ်နော်.. စမ်းကြည့်ကြပါလား.. Ignore လုပ်တာမဟုတ်ဘူး Neglect လုပ်တာမျိုးလေ.. တဖက်လူ မခံချိမခံသာ ဖြစ်နေတာကို မြင်တွေ့ ခံစားနေရတာ အရမ်းအရသာရှိပါတယ်။ တချို့လူတွေက ရန်ပြန်တွေ့နေရင် သဘောကျနေပြီး အဲဒီ့ရန်ပွဲက ဘယ်တော့မှ မပြီးနိုင်တော့တာလေ။ သူကဒေါသထွက်လိုက်၊ ကိုယ်ကတုန့်ပြန်လိုက်။ ကိုယ်ကဒေါသထွက်လိုက်၊ သူကတုန့်ပြန်လိုက်နဲ့ သံသရာလည်နေရော။ ကိုယ့်စိတ်လေးကိုယ်ထိန်းပြီး မသိချင်ယောင်လေး ဆောင်နေလိုက်ရင် ၃ ခါထပ်ပိုပြီး မစကြတော့ပါဘူး။ (ဟီး.. Green Rose ကငယ်ငယ်ကဆို အရမ်းရန်ဖြစ်သန်တာ.. ခုတော့……)
တချို့ကိစ္စတွေမှာ မသိချင်ယောင်ဆောင်တာကလည်း လက်နက်တစ်ခုပါပဲလို့.. လို့……..
အကောင်းဆုံးလက်စားချေနည်း နဲ့ နှိမ့်ချဆက်ဆံနည်းက လျစ်လျူရှုလိုက်တာပါပဲတဲ့ …. :chee:
အဲဂလို မသိချင်ယောင် အဆောင်ကောင်း၊ လျစ်လျုရှုချင်ယောင် အဆောင်ကောင်း၊ အရေးမလုပ်ချင်ယောင် အဆောင်ကောင်းလို့ပဲ အတဲ တွေကွဲတာ ဘယ်နှစ်ခါတုန်း မမှတ်မိ (ချင်ယောင်ဆောင်လို့ရ) တော့ဘူး။
အဲဒါက.. ကိုယ်ကနိုင်သွားတယ်ထင်အောင်.. လစ်လျှူအရှုပြတာကြီးပဲ..
တကယ်က.. အဲဒီအဖြစ်က.. ကိုယ့်စိတ်ထဲစွဲသွားတာမို့.. ဥပေက္ခာမဆန်ပါဘူး..
တချိန်ချိန်မှာ.. ပြန်တောင်ပေါ်လာပြီး.. ဥပါဒါန်ကြောင့်.. ဥပါဒ်ရောက်နိုင်ပါသေးတယ်..။
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး.. လက်နက်အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နေတာကို.. လစ်လျှူမရှုချင်လို့.. ၀င်ပြောတာ…။
ဂေါတမဗုဒ္ဓကဟောတယ်တဲ့..။ လက်နက်အရောင်းအ၀ယ်က.. သမ္မာအာဇီဝမဟုတ်ဖူးတဲ့..။
အမေရိကားနဲ့.. ရုရှားကတော့ လက်နက်ရောင်းပြီးချမ်းသာနေကြတာ..
ဒီပို့စ်ကို.. လစ်လျှူရှုလိုက်ရကောင်းသားနော… :kwi
ဒီလိုပေါ့ ဒဂျီးနဲ့ ခိုင်ဇာရယ်…
မေ့ချင်ရောင်ဆောင်ရင်း တစ်နေ့နေ့တော့ တဂယ်မေ့သွားမှာပေါ့ :buu:
အဲ့ တစ်နေ့က ဘယ်တော့တုန်းဟင်။ သူငယ်ပြန်မှ ငယ်တုန်းက မေ့ချင်ယောင်ဆောင်ထားတာတွေ ပြန်ပေါ်လာရင် ချက်ချာဂျီးနော်။
ဟီးဟီး … အေးနော် သူငယ်ပြန်မှ ငယ်ရီးစားတွေ တန်းစီရွတ်နေရင် :harr:
ဘူသိတာမှတ်လို့ အဲဒါဘယ်သူတွေလည်းလို့ မေးလာခဲ့ရင် ကြွေးရစရာရှိတဲ့လူတွေလို့ပြောလိုက်ပေါ့…. :harr:
အမြတ်အများကြီးမယူရင်လည်း သမ္မာအာဇီဝမဟုတ်ဘူုးတဲ့လား.. ဒါဆို.. အမြတ်လုံးဝမယူပဲ အရှုံးခံပြီးရောင်းရင်ရော…
စကားမစပ်….. အမေရိကား နဲ့ ရုရှားက ဘယ်သူ့စကားနားထောင်ကြတာလဲဟင်..
သူကြီးစကားကို ဘဲသူတို့နားထောင် လိုက်လုပ်ကြတာ။
ဒါမှ တို့ သဂျီးကွ၊ ပေါ့သေးသေးမှတ်လို့။
အဲ့လို့လစ်လျူရှုတတ်တဲ့သူတွေ၊ သူများစိတ်ကိုနားမလည်တဲ့သူတွေက အပိုဂျီး၊ လူပိုဂျီးတွေ ဖြစ်တတ်တာများတယ်ထင်တယ်…
မကောင်းတဲ့အရာတွေမှာ လစ်လျူရှုတာကောင်းပေမယ့် တစ်ချို့နေရာတွေမှာတော့ သူတစ်ပါးကို စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်… ဥပမာ ကိုယ်သိပြီးသားဟာသတစ်ခုကို အားရ၀မ်းသာလာပြောပြရင် နားထောင်ပေးပြီး ရယ်လိုက်တာမျိုး…
နောက်ပြီး တစ်ချို့ကိစ္စတွေကျ မဟုတ်တာလာပြောလို့ ငြိမ်ခံနေရင် ဟုတ်တယ်သဘောမျိုးသက်ရောက်သွားတဲ့အတွက်က မသိချင်ယောင်ဆောင်လို့လည်း မရပြန်ဘူး…
လောလောဆယ်တော့ လုံမနာမည်က Fighter ဖြစ်ပါကြောင်း… :harr:
Green Rose ကလည်း အမြဲတမ်းအတွက် လို့မပြောပါဘူး။ တချို့သောကိစ္စတွေ အတွက်ပဲပြောတာပါ။ ရောင်းကတည်းက ရွာသူ၊ ရွာသားတွေအတွက်ပါဆို..
စကားမစပ် Fighter ဆိုတဲ့ နာမည်လေးက မိုက်တယ်နော် နာမည်မပျက်စေနဲ့ ထိန်းထား.. ထိန်းထား….
ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့ အသက်ကသာ ၄၀ အခုထိ စိတ်ကောက်တုန်း…..
လူကသာ ငါက အားလုံးမေ့ပစ်နိုင်တယ် ခနခနပြောတာ….
အဲ့အကြောင်းကို ခနခန ပြောတာ နင်ပြောတာ သုံးခါရှိပီလို့ ပြောမှ ရပ်သွားတာလဲ ဘယ်နှစ်ခါမှန်းမသိ….
အဲ့လိုလူတွေ ပုံနေတော့ စိတ်ညစ်ပါ့….
ကျွန်တော်ကတော့ မေ့ဖို့ လည်း မကြိုးစားပါဖူး….
မေ့နိုင်တယ်လို့ လည်း မပြောချင်ပါဖူး………..
သူတို့ ပြောရင် ကြားကို မကြားတော့ဖူး…………..
သြော်.. တိမ်မည်းက ခရီးသွားတာတွေများပြီး ဧရိယာပြင်ပရောက်နေတာကိုး… စိတ်မကောင်းစရာပဲ ဟိုနေ့က ၀တ်မှုန်ရွှေရည် ကပြောတယ် တိမ်မည်းကို သူ့ဘ၀နဲ့ရင်းပြီး တိုးတိုးလေးပြောချင်လို့ခေါ်တာ ခေါ်လို့မရဘူးတဲ့.. ခုတော့… ဟိုက စိတ်ဆိုးသွားပြီ… :harr:
ဒီဘ၀မှာ ၀တ်မှုန်လေးနဲ့ လွဲရရင် ဒင်းတို့ ကြောင့်……….
ဘယ်နှယ့် တနိုင်ငံလုံးကို GSM တော့ တိုင်အပြည့်စိုက်ပီး ပေးမယ် မစဉ်းစားဖူး…..
WCDMA နဲ့ ဖင်ဆော့ချင်သေးတယ်…..
CDMA450 ဟာမကြီးနဲ့ ကလည်း မပျက်သေးဖူး……
ပို့စ်ပိုင်ရှင် ရောင်းတဲ့လက်နက်က ကျနော်အညာသားအတွက် အရမ်းကို မြင့်မားလွန်းနေတယ်ဗျာ.မဝယ်နှိုင်ပါဘူး ဒါ့ကြောင့် ဒီလက်နက်လေးမျိုးရရင်တော့ ဝယ်ချင်မိ့တယ်ဗျာ (နေပြည်တော်-ရန်ကုန် ပြေးဆွဲတဲ့ …Express ကားပေါ်မှာ စီးလာတဲ့ ကားက နှိုင်လွန်ကတ္တရာ ခင်းထားတဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်အရောက်မှာ ဗိုက်ထဲက ပိုးမျိုး(၈၀)မခံမရပ်နှိုင်လောက်အောင် ဆန္ဒပြလာတဲ့ အခါ ဘယ်လိုလက်နက် သုံးပြီးဖြေရှင်းရပါ့မလဲ ပို့စ်ပိုင်ရှင်သုံးတဲ့ လက်နက်လို တစ်ကြိမ်က နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ် ထိ့အောင် စပါယ်ရာရော ဒရိုင်ဘာကိုရော ပြောပြီးပြီ လေ(ကားမထွက်ခင်ကတည်းကသူတို့စည်းကမ်းထုတ်ပြီးသား သတ်မှတ်တဲ့ နေရာမှာပဲ ရပ်ပါ့မယ်စည်းနှင်း လိုက်ပါကြမယ့် ခရီးသည်များ ကားမထွက်ခင် ကိုယ့်ကိစ္စု ပြီးစီးအောင် ရှင်းလင်းထားဖို့ပေါ့)အဲ့ဒီခရီးသည်နေရာမှာ ပို့စ်ပိုင်ရှင်ဆို ဘယ်လက်နက် သုံးမလဲခင်ဗျာ့
ကိစ္စရှင်းပီးရင် အစ်မအိတ်ကြီး အမြန်ပစ်လိုက်ပါတော့ဗျာ
ကားပေါ်မှာ နံလွန်းလို့..ွေိွေိ..
အဲဒါကတော့ မနေနိုင်တဲ့ သူတွေရှင်းရမှာလေ.. ကိုယ်လည်း ကိုယ်မနေနိုင်တဲ့ကိစ္စကို ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ရှင်းပြီးပြီ။ ဒါဗြဲ… ဒီတစ်ခါတော့ ဦးပေ လာရောင်းတဲ့ လက်နက်ကိုသုံးလိုက်မယ်။ :harr:
ပြဿနာဖြစ်မယ့်နေရာတွေကို တတ်နိုင်သမျှရှောင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ
လျှစ်လျှူရှုမယ့်အစား ၊ ရူးချင်ဟန်ဆောင်လိုက်တာ ပိုကောင်းပါမယ်
သူများရောင်းတဲ့လက်နက်ကို ၀ယ်မှာလားမ၀ယ်ဘူးလားပဲပြောပါ။ ဘာလို့ ကိုယ့်လက်နက်ကို လာရောင်းနေရတာလဲ… ဟွန်း…..ဈေးကွက်လုဖို့မစဉ်းစားနဲ့နော် အဲဒါဆိုရင်တော့ Green Rose က မသိချင်ယောင် ဆောင်နေမှာမဟုတ်ဘူး… :chee: :chee:
ရူးချင်ဟန်ဆောင်တာထက် မူးချင်ဟန်ဆောင်တာက အဆိုးဆုံး
အမကတော့ ဥပေက္ခာပြုတယ် ။ စိတ်ထဲမှာကို မထားတော့တာ။
no feeling ဖြစ်အောင် နေလိုက်တယ်။ နေတတ်အောင် ကြိုးစားရင်း နေတတ်သွားတာ တော်တော်ကြာပြီ။ အကျင့်ပေါ့။ တခါတခါကျပြန်တော့လည်း ကိုယ်က ခံစားမှုများမဲ့နေသလားတောင် တွေးမိတယ်။
အဟမ်း…. အဟွတ်…. အဟု…..
အာ စောနက စားလာတဲ့ ငါးပိရည်က ချောင်းဟန့် နေပေါ့လား
အေးလေ.. ငါးပိရည်ပဲ ရှိတော့လဲ ငါးပိရည်နဲ့ မြိန်အောင် စားရတာကိုး
အို… ကွန်မင့်ပေးမလို့ ဟာ ၊ ဘေးချော်ကုန်ပေါ့
မောင်ပေ့ ဘော်ဒါတစ်ယောက်က မောင်ပေ့ကို ပြန်ဝေမျှ တဲ့ အသိလေးကို ကွန်မင့်ချင်လာတယ်
“““ မင်းတို့ ငါတို့ဘီယာသောက်တာ မကောင်းမှန်းသိရက်နဲ့ သောက်နေကြတာ ဘာလို့ လဲတဲ့
တဏှာကြောင့်မို့ တဲ့ …”””
တစ်ခုခုကို စွဲသွားပြီဟေ့ဆိုရင် ဘာဖြစ်ဖြစ် ရှေ့ ဆက်တိုး တာ တဏှာ ပါကလား
“““ တဏှာလွန် ကျွန်ဖြစ် ””” ဆိုတဲ့ စကားဟာ သိပ်မှန်သလို… သိပ် ကြောက် စရာကောင်းတာကွဲ့ 
ခစ်တ မြန်မာနိုင်ငံ မန်းတလေး
အဲဒီ့နေ့က ကျေနပ်လိုက်ပုံများ ခုပြန်တွေး ခုကျေနပ်တုန်းပါပဲ။
အဲ့ဒါ အဲ့ဒါ .. sex and money ထက် လူတွေပိုမက်တဲ့အရာ …
ဟုတ်ပါတယ် recognition ပါပဲ။
အဲ့စိတ်ကို ဆွပေးနိုင်ရင် ကောင်းကောင်း အလုပ်ဖြစ်ရဲ့…
ညီးကော ဟတ်ထိအောင် ဘယ်နှစ်ခါပစ်ဖူးလဲ ….
သူပြောနေတာ သိရသလောက် သူဘဲ ပစ်ခံနေရဒယ်ဒဲ့……..
စဖတ်ကတည်းက မထင်မှတ်စရာကို လက်နက်ကောင်းဖြစ်အောင် ရေးတတ်
နှင်းနှင်းကိုယ်တိုင်လည်း Green Rose နေရာမှာဆိုရင် အဲ့စိတ်လေးပေါ်လာပြီး
လူမှုဆက်ဆံရေးမှာတော့ လျစ်လျူရှုတာတို့၊ဥပေက္ခာတို့ဆိုတာ စိတ်ထဲမှာ
တအုံနွေးနွေးနဲ့မကောင်းတဲ့ခံစားချက်ကို ပိုကြီးထွားစေပြီး ဆက်ဆံရေးကိုလည်း
အေးခဲစေတတ်တယ်လေ။ နှင်းနှင်းကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်
အောင်းထားမယ့်အစား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖြေရှင်းညှိနှိုင်းပြီး အဖြေရှာလိုက်တာကို
Hninn Hninn ရေ..
မဟာဗန္ဓုလဖြစ်လာမယ့်မောင်ရစ် ညီလာခံမှာ ဘေးကလူ တစ်တောင်နဲ့ထထောင်းတာလဲ ဒါမျိုးနေမှာဘဲနော်
သူလည်း Green Rose လိုပဲအထောင်း ခံရတာတောင်ကျေနပ်နေမှာပါ။ သေချာတယ်။
ဒီလို ဈေးဝယ်သူမျိုးနဲ့တွေ့ရတာ စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ.. မောင်မင်းကြီးသား ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေ… ဈေးလည်းမဆစ်၊ ဂဂျီဂဂျောင်လည်းမကျမို့ပါ။
ဂရင်းရို့စ်ကို ဦးကြောင် အကြီးဂျီး ခြစ်တယ်…။ ဖြစ်နိုင်ရင် roast လုပ်ပြီး ကိုက်စားပစ်ချင်တယ်။ ဒဂယ်ပြောဒါ..။
:chee: :chee: :chee:
ချင်ယောင်ဆောင်တဲ့ သဘောမဟုတ်ပဲ ….
ဖာသိဖာသာနေလိုက်တယ်ဆို ပိုကောင်းမလားနော် ….
” စကားနည်း ရန်စဲ ” ပေါ့ လေ .. :hee:
မနှစ်က လက်ရာဟောင်း ပါလား။
အခုတော့ လက်နက်ရောင်း တဲ့ အမှု နဲ့ Black List ဝင်သွားတာ မြန်မာပြည် ကနော်။
ဒါကို မကျေနပ် လို့ မြန်မာဂျာနယ် တစ်ခု က နေ အမေရိကား က သူတွေ ကို မြန်မာလို ရန်ထောင်ထားတယ်။